Ndị ọrụ ụgbọ elu Russia kwadebere ịmalite ụgbọ elu gaa na ọdụ ụgbọ mmiri Sharm El Sheikh na Hurghada
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Russia » Ndị ọrụ ụgbọ elu Russia kwadebere ịmalite ụgbọ elu gaa na ọdụ ụgbọ mmiri Sharm El Sheikh na Hurghada
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Na -agbasa n'Ijipt • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ndị ọrụ ụgbọ elu Aeroflot na S7 ga -amalite ụgbọ elu si Moscow, Rossiya, nke na -efega Egypt ugbu a, ga -abawanye ugboro ugboro nke ụgbọ elu. Ural ụgbọ elu, ụgbọ elu Azur, Nordwind, Ikar, Red Wings, S7 na Yamal ga -amalite ụgbọ elu na mpaghara ahụ.
Onye na -ahụ maka ụgbọ elu obodo Russia nyere ikike ka ụgbọ elu itoolu malite ụgbọ elu ndị njem Egypt.
A ga -ebido ụgbọ elu Hurghada na Sharm El Sheik n'ime otu izu ma ọ bụ abụọ.
Ụgbọ elu ga -achọ opekata mpe otu izu ịmalite ahịa wee mepụta netwọ ụgbọ elu.
Federallọ ọrụ ụgbọ elu Federal nke Russia kwupụtara taa na a ga -enye ndị na -ebu ụgbọ elu Russia 9 ikike ịmalite ụgbọ elu a na -eme mgbe niile site na Russia gaa ebe ntụrụndụ Hurghada na Sharm El Sheikh nke Egypt.
“A ga -enye ndị ụgbọ elu ikike ịrụ ụgbọ elu otu izu kwa ụzọ ọ bụla na -aga Hurghada na Sharm EL Sheikh. Ọzọkwa n'okporo ụzọ Moscow - Hurghada na Moscow - Sharm El Sheikh, ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu na -abawanye site na ụgbọ elu 5 ruo 15 kwa izu, ”onye na -ahụ maka ụgbọ elu obodo Russia kwuru.
Aeroflot na ụgbọ elu S7 ga -amalite ụgbọ elu si Moscow, Rossiya, nke na -efega Ijipt ugbua, ga -abawanye ugboro ụgbọ elu. Ural ụgbọ elu, ụgbọ elu Azur, Nordwind, Ikar, Red Wings, S7 na Yamal ga -amalite ụgbọ elu site na mpaghara.
Agbanyeghị, ụgbọ elu ndị Russia ga -achọ opekata mpe otu izu iji bido ụgbọ elu ọhụrụ na Egypt. Ndị na -ebu ụgbọ ga -achọ oge iji malite ahịa wee mepụta netwọ ụgbọ elu.
Onye ọrụ ụlọ ọrụ ahụ kwuru, "Ndị ụgbọ elu Russia agaghị emepe ụgbọ elu ọhụrụ na Egypt na nso nso a, kesara oke ego naanị ụnyaahụ - ndị na -ebu ụgbọ ga -achọ opekata mpe otu izu ịmalite ahịa na ịhazi usoro."
Tinyere atụmatụ ịbawanye ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu na -aga Egypt mgbe niile, Agencylọ Ọrụ Federal Transportgbọ njem Federal Russia na -akwadokwa ịmalite ụgbọ elu ịgba akwụkwọ na mba ahụ.
Nkwupụta nke ụlọ ọrụ ahụ kwuru na "ụlọ ọrụ ahụ na -arụ ọrụ na ndị isi gọọmentị etiti nwere mmasị ka ha nyefee amụma n'isi ụlọ ọrụ na -arụ ọrụ iji mụbaa ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu ụgbọ elu oge niile wee malite n'obodo ndị mepere emepe nke Egypt, site na Moscow na mpaghara ndị ọzọ nke mba ahụ." .